Sarivongana ho an'ny vahoaka Montreal, ny fivarotam-pambolena sy ny marika
Montreal Public Markets, Varotra Mpamboly, Marchés Publics
15 Montreal Tananan'ny Vohikala Notadiavinao
Ny tsenam-bahoaka ao Montreal no iray amin'ireo fifaliako tsotra indrindra amin'ny maha-manetry tena ao an-toerana, mandevona amin'ny alàlany ny fijeriny sy ny fofony, indrindra fa ny fivarotam-baobakadinan'ny tanàna amin'ny famokarana isan-taona, araka ny lisitra etsy ambany.
Ny fampitahàna ny vokatra sy ny vidiny raha manonofy ny famonoan-tsokiko manaraka avy amin'ny alikaola , dia tsy handany loatra ny handresy lahatra ahy ny handany ny andro iray amin'ny iray amin'izy ireo koa, raha tsy mandositra ny sandry aho (ary ny sarimihetsika portable toerana) mba hitondra ny fividianana sakafo ao anatin'ny 30 minitranin'ny fivarotana.
Andeha hojerentsika izany, tsy ela akory izay dia nitsidika ny tsenan'ny mpamboly iray ny fiainana isan'andro .
Talohan'ny nanamboarana ny vavony ho an'ny fivarotana varotra, toeram-pivarotana lehibe ary toeram-pivarotana entana, ny tsenam-bahoaka dia ny foiben'ny fiaraha-monina, loharanon-tanàna iray ary fanomezana vatsy azo tsapain-tanana.
Ny atody, ny hena, ny trondro, ny ronono, ny zava-maniry sy ny voankazo ary ny voankazo dia nivory teo amin'ny toerana iray satria ny mponina ao an-toerana dia nametraka ny ankohonany teo anelanelan'ny fifosana sy ny hetsika sosialy. Raha ny tena izy, alohan'ny alàlan'ny telegrafy elektrôlôjia sy ny famolavolana ny telefaona, dia ny tsenam-bahoaka no mora indrindra raha toa ka fomba mahazatra ahafahana manangona namana sy fisoloana vava ary mandamina ny raharaha eo an-toerana. Ny ankamaroan'ny olona dia tonga teny an-tsena na iray na iray hafa mba hahatonga azy ho tsotra fotsiny.
Tahaka ny hoe ny tsenan'i Jean-Talon , iray amin'ireo tantsaha lehibe indrindra any Amerika Avaratra, dia tsy ampy ny fiderana tahaka izao. Amin'ireo tsenam-bahoaka rehetra ao Montreal, ity no nanova ny fiainako ary nampiova ahy tao anatin'ny tsirin-tsakafo.
Afaka misakafo toy ny mpanjaka ianao, na ao an-tranonao (na trano fandraisam-bahiny an'io raharaha io), aorian'ny fitsidihana vitsivitsy an'i Marché Jean-Talon. Jereo ny fampiasana ny plorary. Nolazaiko hoe "fitsidihana" noho ny antony iray. Tsy ampy ny manaiky ny maha-manokana io tsena io. Na dia taorian'ny fitsangantsanganana tsy hita isa nandritra ny taona maro, dia mbola mahita vokatra vaovao sy mampientanentana miaraka amin'ny sakafo mahandro sy mamokatra tolotra fifantenana avy amin'ireo mpivarotra.
Marché Atwater . Ity hatsaran-tarehy ity eto no tsena tsena voalohany hitako hatramin'izay. Izaho dia pipsqueak ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa ary mbola tadidiko foana ny fanandramana mahavariana tao anatin'io metatra gouda io izay nalaiko tao amin'ny fivarotam-bokatra ao an-tsena, La Fromagerie Atwater. Ary ny zanak'ondry. Andriamanitra tsara ô, ilay zanak'ondry. Vola vola kely no lany, mihoatra ny 40 dolara ho an'ny tongotra roa vita amin'ny lamban-tsakafo, saingy ny sakafo navoaka tao dia tsy hay hadinoina.
Marché Saint-Jacques dia namatsy ny mponina teo an-toerana niaraka tamin'ny famokarana tantsaha tamin'ny taona 1868, taona talohan'ny nanamboarana trano maotina tao amin'ny trano fandraisam-peo nasionaly, izay atsimon'i Parc La Fontaine . Na izany aza, ny toeram-pivarotana be mpahalala dia efa nakatona tamin'ny taona 1960 mba hanamboatra ny biraon'ny tanàna. Nisy orinasa maromaro vitsivitsy navela hanokatra tamin'ny taona 1983, saingy tsy misy naoty lehibe.
Jereo koa: Torolàlana momba ny sakafo mahazatra Montreal: mihinana eo an-toerana, misakafo tsara ary mamonjy vola
Tamin'ny taona 2007, ny trano fivarotana dia nivarotra ilay trano teo ambanin'ny fehezan-dalàna fa ny tompon'ny trano dia manangana indray ny kianja ambanin'ny tany ho an'ny tsenan'ny tsenam-barotra indray. Noho izany dia nivoy tsikelikely tamin'ny fivarotana mpivarotra, fividianana entana, fivarotana kafe ary menaka manokana ny Marché Saint-Jacques, taorian'ny vokatra nandritra ny taona maromaro. Amin'ny volana maromaro, ireo mpivarotra ivelan'ny trano dia manampy amin'ny fifangaroany, toy ny an'ny tsena iraisam-pirenen'i Montreal hafa izay manolotra sehatra varotra ivelany amin'ny lohataona, fahavaratra sy fahavaratra, mivarotra voninkazo, zavamaniry ary voankazo sy legioma vaovao.
Ny iray hafa an'ny tsenam-bahoaka ao Montreal izay "lehibe dimy", Marché Maisonneuve dia manana fe-potoana mitovy amin'ny an'ny Marché St. Jacques amin'ny heviny fa raha nanokatra ny ampitson'ny taonjato faha-20, dia nakaton'ny fitantanan-tanàna izany tamin'ny taona '60 ny fanavaozana azy amin'ny '80 taona. Ny voankazo sy legioma vaovao, ary ny fivarotan-tsakafo, ny fivarotam-bokatra sy ny fivarotana trondro ihany koa dia eo an-toerana.
Marché de Lachine, tsenam-barotra ampaham-barotra ao Montreal, dia mivelatra isan-taona, mivarotra ny olona ahiahiana, ary manao ny fanamboarana lavaka mahafinaritra mandritra ny andro iray hiatrehana ny lakandranon'i Lachine raha toa ka mahavita manandrana ny tsirony mahamenatra sôkôlà, croissants ary amidy amidy amidy avy amin'i Marius et Fanny. Mankao fotsiny ny làlana faha-18 ao amin'ny distrikan'i Lachine teo akaikin'ny sambo iray. Ho tonga haingana ianao.
Raha mikasika ny tsena iraisam-pirenen'i Montreal izahay, te-hitondra ny Bonsecours Marché aho satria misy fifangaroan-kevitra kely ihany ny amin'ny fametrahana ny rafitra Old Montreal. Eny ary, tsy vokatra voa-panafody izany ary tsy misy intsony. Tamin'ny taona 1847 no niantombohan'ny tsenan-tseraseran'ny vahoaka izy io, tamin'ny voalohany, tamin'ny 1847, raha vao notokanana tamin'ny 1963 ny trano fanorenana malaza, ary tamin'ny tondra-tsakafo maromaro tany Montreal, izay nitsahatra tamin'ny asa aman-draharaha tamin'ny taona '60. Androany, ny Bonsecours Market dia trano fandefasana entana misy ny lamaody eo an-toerana - fitaovana, hoditra vita amin'ny hoditra, akanjo - ankoatra ny zavakanto, fahatsiarovana, ary ny singa mpanangona.
Ny tsenam-barotra ho an'ny besinimaro ao Montreal
Raha toa ka mivoha isaky ny vanim-potoana ny tsenam-bahoaka ao Montreal, ny tanàn-dehibe koa dia manana ny tsenany amin'ny tsena iraisam-pirenena izay mivoha raha mbola mafana ny toetr'andro mba hanohanana azy ireo, na aiza na aiza manomboka ny faran'ny volana Aprily ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra.
Ho an'ny tanjona amin'ity lisitra ity dia nampidiriko ny tsipika tsaratsara kokoa izay efa nitohy nandritra ny taona maro. Mariho fa ankoatra ireo tsenam-barotra mahazatra ireo, ny tanàn-dehibe dia ahitana karazan-tsakafo ambarom-bozaka am-polony maro amin'ny fahavaratra ary mety hianjera mihitsy aza izay mety ho an'ny mponina eo an-toerana. Raha toa izy ireo dia miseho tsotsotra indraindray avy amin'ny haino aman-jery eto an-toerana, ny habaka sy ny toerana misy azy dia miparitaka amin'ny vavany.
Raha any an-toerana ianao ary mitady zavatra goavana, alao ny Frontenac Metro. Ny vokatra dia mahafa-po. Ny toeram-piantsonan'i Metro any Montreal izay ahitana sombin-tsakafo kely maivana kely amin'ny tsena dia misy Rosemont Metro (tsy amin'ny taona 2015, mihidy ho an'ny famerenana amin'ny laoniny), Papineau Metro, Sauvé Metro sy Shebrooke Metro (any andrefany ao Carré St. Louis).
Ho an'ireo mpitsidika dia nilaza aho fa any amin'ny tobin'ny Mont-Royal Metro Station (toeram-ponenana lehibe iray mba hisintonana sns ...), ao amin'ny Metro Côte-des-Neiges (paiso miaraka amin'ny fitsidihan'i St. Joseph's Oratory ?) sy ao amin'ny Square-Victoria Metro (ity iray ity dia kely kokoa, voninkazo mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, ka raha mangataka sakafom-bokatra tsara indrindra ianao, manomboka mitsangatsangana any McGill, eo anoloanao eo amin'ny sehatra voninkazo, ary mandao an'i St. Paul ho an'ny sasany amin'ireo sakafo mahandro tsara indrindra izay hohaninao any Olive sy Gourmando, ary iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Bruxelles any Montréal ).
Farany, raha ankafizo ny ahitrao ny zavatra ataonao tahaka ny azy ireo, mipetraha ao amin'ny Kianja Phillips ao Ste. Catherine Street ao afovoan-tanànan'i Montreal. Izy io dia feno vokatra avy amin'ny maple, sôkôla ary voankazo. Indraindray misy karazam-boninkazo eo an-toerana. Bonus: matetika ireo mpangalatra dia natsangany teo akaikin'ny sehatry ny fivarotana fitaovam-piadiana. Ary tandremo tsara ny pizza tsara indrindra ao Montréal . Eo amin'ny faran'ny mifanohitra amin'ny kianja.
Discover: Tranom-bahoaka Tsara Indrindra any Montreal
Vakio ihany koa: Mofomamy sy mividy an'io
Farany: Montreal Food You have to try
Montreal ny 10 Hottest Brewpubs
Aiza no hijanona ao Montréal, Québec
Fetiben'ny Krismasy Montreal 2017-2018
Fiadiana ny amboara eran-tany 2018: Bars, toeram-pialamboly, toeram-pisakafoanana ary kafe
Famintinana fotsy: Session 2
Ny famangian'i Budapest tamin'ny volana febroary
Ny Sunsets tsara indrindra any Brooklyn manerana ny Statue Liberty sy ny Harbor NY
Museum Museum O'Keeffe, Santa Fe - O'Keeffe Studio, Abiquiu
Fitsarana sy sazy an-tsokosoko any Amerika Afovoany
Top Events & Festivals Barbados
Sakafo mandritra ny fahavaratra tsy mila sakafo amin'ny lakozia
Nianjera na nangalatra ny pasipaoronao; Ahoana izao?
Fanomezam-boninahitra fanomezana ho an'ny andro valisoa ho an'ny olona amin'ny fiainanao
Aiza no handehanana fiverenana mitsangatsangana manodidina Kansas City
Fetiben'ny Guelaguetza any Oaxaca
Railfair ao amin'ny McCormick Stillman Railroad Park
Ny mozika Amerikana Great Rib Cook-Off sy Music Festival